Indlu yeendwendwe "tou Teli" - I-Airbnb
Indlu yeendwendwe "tou Teli"
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguAmy
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uAmy iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Indlu yeendwendwe yindlu yosapho apho sisachitha ixesha elininzi enyakeni. Uya kuzifumana ukwindawo epholileyo ene-vibes eninzi entle kwaye uxhotyiswe ngokupheleleyo ngayo yonke into umntu anokuyidinga. I-Wifi isimahla kwilali.
Indlu yeendwendwe ibekwe kumbindi welali, ecaleni kwesikwere selali esembindini kunye nomthi we-aagelong platanus kunye nakwindawo yekhefi yasekhaya - kafeneion- yelali. IiTaverna zifumaneka kufutshane nendlu.
Umbono weentaba kunye nentlambo iyamangalisa!
I-Kefalari ibekwe emazantsi entaba iZireia, ilungele abathandi bendalo kunye nabahloli bamazwe. Kumgama okufutshane, umntu unokonwabela uhambo oluya e-Stymfalia Lake kunye neMyuziyam yeNdalo apho imbali yezityalo kunye nezilwanyana kunye nobomi bemveli balo mmandla buveziweyo!
Ilali ibekwe embindini weendawo ezininzi zakudala kunye nembonakalo yendalo.
Nceda uqhagamshelane nathi ngokubhekisele kwi-intanethi ye-για δραστηριότητητες, δδιαφέροντα μέρη Πίσκεψψος, Πέρωντα Thumela i-imeyile kwi-imeyile yakho!
Inombolo yomthetho: 00000333674
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kefalari